Jiilka: Sanduuqa Solutions Solutions
Mawduuca: Qabashada Kaarboon & Kaydinta, Gaadiid Nadiif ah, Tamarta La cusboonaysiin karo, Tignoolajiyada
Burbur dhaqaale - sida isbedelka cimilada - wuxuu abuuri karaa fursado loogu talagalay shirkadaha horay u fekeraya. Sanduuqa Xallinta Khariidadda Cimilada II waxay ku maalgelisaa ganacsiyada ka qaybqaata ku-meelgaarka ah ee kaarboon hooseeya, dhaqaalaha waara.
$ 7.5 milyan; laga soo bilaabo 2014
Sanduuqa maalgashiga ah ee koritaanka shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo shirkadaha yar yar ee ganacsiga leh ee bixiya xalalka isbedelka cimilada. Jiilka istaraatijiyadu waxay raadinaysaa in ay maalgashato ganacsiyada abuuraya qiime iyadoo kor u qaadaysa waxsoosaarka khayraadka iyada oo la yareeyo wasakheynta, qashinka, iyo qiiqa.
Soo Celinta Lacagta: Sanduuqa wuxuu ku jiraa bilow maaliyadeed oo wanaagsan oo horeyba uga soo baxay maal-galintiisa Sanadka Jiilka adigoo soo iibsaday Unilever.
Saamaynta Bulshada & Deegaanka: McKnight waxay dib u eegis ku samaysay waxqabadka sanadka 2016-ka, laakiin Generation waxay tixgelinaysaa xogaheeda qarsoodi ah, si kastaba ha ahaatee saamayntu waa kuwo cajiib ah. Tusaale ahaan Generation ayaa dhowaan $ 55 milyan oo lacag ururin ah ku soo gashay shirkadda korontada ee California, Proterra, oo ay la socoto BMW i Ventures. Basaskani waxay ciribtirayaan wasaqda hawada naaftada ah, marka la isku daro soo saarida korontada dib loo cusbooneysiin karo, waxay bixisaa khariidad ku aaddan magaalooyinka waara oo dheeraada.
Bixinta daahfurnaanta hantida hantida hantida gaarka ah iyo saameynta waa caqabad. Shirkadahaasi waxay inta badan ku dadaalaan inay noqdaan kuwa ku fadhiya aamusnaanta suuqa suuqyada.
Nidaamka dhalinta ee saameynta qiyaasaha waa hammaan, cabiridda arrimaha muhiimka ah ee deegaanka, arrimaha bulshada iyo arrimaha maamulka ee dhammaan shirkadaha ku jira sanduuqa. Calaamadaynta tirada ee "Baaxadda 3" ee qiiqa - Gaasta aqalka dhirta lagu koriyo ama kaydinta hawlaha shirkada iyo alaabada. Tani waa jaantus dahab ah oo warbixinta, laakiin waxay tufaaxa ka dhigtaa tufaaxa maalgelinta kale ee adag.
Sawir Sawir ah: (Sawirka) sawirka Georgina Goodwin, oo madax ka ah M-KOPA Solar